Miverina ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Ity no mety ho fiverenana azonao atao amin'ny Apple Watch
Apple dia nanolotra serivisy aorinan'ny varotra feno fialonana ary miaraka amin'ny Apple Watch tsy ho ambany izany. Ny zavatra tokony ho ao an-tsaina dia izany Ny fiverenan'ny vokatra Apple dia tsy manaraka làlana mitovy amin'ny Apple Store ofisialy toy ny amin'ny Premium Resellers na mpivarotra hafa.
Tamin'ny voalohany, ny fiverenan'ny vokatra Apple dia navela na inona na inona ny toerana nividiananao azy ary na inona na inona fampiasana na tsia ny vokatra, fa taona vitsivitsy lasa izay dia nametraka fetra i Apple raha tsy mividy ny vokatra ao amin'ny fivarotana ofisialin'izy ireo isika dia ny fotoana ahafahantsika mamerina azy io indray misokatra raha tsy lasa ny 14 andro.
Miaraka amin'ny Apple Watch dia tsy ho latsa-danja izy ireo ary hamela ireo mpampiasa hamerina ny Apple Watch, rehefa nosokafana izy ireo, raha toa ka tsy naharesy lahatra anay ny maodely, ny habeny na ny loko ary ny maodelin'ilay tadiny. Ho an'ity dia tsy maintsy manao fotoana any amin'ny Apple Store isika, mitondra ny vokatra sy ny fonosany amin'ny toe-javatra tonga lafatra ary tsy maintsy ho 14 andro mahery izy io.
Na izany aza, miaraka amin'ny Apple Watch, ireo avy any Cupertino dia nieritreritra fomba vaovao hiverenana ary izany dia tsy ilaina ny famerenana ny famantaranandro iray manontolo raha ny fanovana ny karazan'ilay tadiny ihany no tadiavinao. Ao amin'ny Apple Store ara-batana dia ho azontsika atao ny miverina ary mifanakalo ireo tadin'ny Apple Watch izay novidintsika ho modely hafa Raha mbola ny tadiny vaovao tadiavintsika dia avy amin'ny famoriam-bola mitovy amin'ilay averintsika, dia ilay maodely Apple Watch ihany.
Ny Apple Watch Edition dia tsy afaka manao izany, fa raha te hiverina izahay dia tsy maintsy mangataka fotoana ary ny tranga dia hodinihin'ireo manam-pahaizana Apple alohan'ny hanomezana alàlana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ity no mety ho fiverenana azonao atao amin'ny Apple Watch
Omaly, nomen'izy ireo paoma famantaranandro aho, ny fanatanjahantena, efa nanandrana aho, tsy tiako izany, niantso ny fivarotana aho ary nilaza tamiko izy ireo fa nampitandrina izy ireo fa raha tsy takona izany dia tsy manova izy ireo, izy ireo mampandre ny fivarotana foana. Tsy maintsy nahita ilay modely nojerena ary nankany amin'ny magazay mba hanandramana azy. Midika izany fa tsy maintsy tazomiko.
Ario io dingana tsy ilaina io amin'ny OS X
Fanavaozana ny sary ho an'ny 2013 sy 2014 iMac